Kletterperk - Pejy fandokoana maimaimpoana ho an'ny ankizy
Keyword: Climbing perk
Fiarovana zaridaina ho an'ny ankizy voajanahary
Ny fiakarana, ny fandanjana ary ny fitsambikinana dia filàna voajanahary amin'ny zaza. Mianatra ny filaharan'ny hetsika ny zaza ary mampiofana ny fahaizany mandrindra.
Ny fiakarana ala dia toerana fitsangatsanganana mety indrindra ho an'ny fianakaviana iray manontolo mba hahafahan'ny ankizy mamela ny etona sy ny fiaran-dalamby ary ny fiaretana.
Valan-javaboary miakatra ho an'ny ankizy - sary nalain'i Alexandra_Koch amin'ny pixel
Misy taranja tady avo lenta ho an'ireo mpanao ski efa mandroso. Zava-dehibe ny miverina eto, raha tsy izany dia mety hampidi-doza. Ny ala miakatra sy ny tady avo lenta rehetra dia iharan'ny lalàna arahin'antoka ka azo antoka ny fiarovana ny tanora sy ny lehibe. Mazava ho azy fa ilaina ihany koa ireo manampahaizana voaofana ary eo an-tanana hanomezana torohevitra sy fanampiana an'ireo mpihanika. "Fiantsonana fiakarana ho an'ny zaza voajanahary" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 14. September 2020 16. Oktobra 2020 Sokajy freetime sy fanatanjahan-tenaKeywords Tady avo lenta, miakatra, Valan-javaboary miakatra, Climbing perk, Ala mananikaLeave a Comment mankany amin'ny valan-javaboary mananika ny zaza voajanahary